Somali platform for science and technology exchange
Google earth borograam aad u xiiso badan
Socodka iyo safarku Somalida reer guuraga ah caadadood bay ahayd. Qarniyo hore haddii ay awr raran jireen oo meel doogan oo roob ka da’ay ay raadsan jireen waxa manta u badalay baabuur, diyaarado, maraakiib iyo tareemada dheereya. Qofka Somaliga ahna dhiigisay ku jirtaa inuu jeclaysto inuu caalamka daafahiisa uu barto.Haddii uu baabuurkii iyo diyaaradihii ay kula gaabiyeen ama aad safarka ka daashay oo inaad socoto aanad rabin Google earth waxay suura gal kaaga dhigtay in adoo kombuyuutarkaaga daba fadhiya in caalamka meeshii aad doonto aad murayada kombuyuutarka aad ka daawan karto.
Google earth si lacagla’aan ah ayaad u soo duuban kartaa. Kadibna caalamka oo dhan meelkastaad ka booqan kartaa.Magaalooyinka waawayn ee caalamaka (specialy US) waxaad ku arki kartaa sawir 3D ah. Adigoo dhismayaasha waawayn geestaad doontid ka eegi kara. Sawiradan hoose waa google earth sida aad ugu arki kartid Manhatan NY.
Halkan ka daawo Film ku tusaya sida aad PC aad ugu arkikartid.
Halkan ka daawo Hargeisa iyo sidaad Google earth ugu arki kartid.
Waxa suurto gal ah in aad ka dalbatid in barmaamijku u kuu calamadiyo wadooyinka tareenka,mitroga ama meeshaad ka heli karto hotels IWM.
Maaha o qudha inaad aragtid magaalooyinka iyo dhismayaasha ee waxaad si fiican ugu arki kartaa buuraha iyo deeganada quruxda badan ee caalamka meeshii aad doontid.
Meelo badan oo wadan keena ah ayaad ka eegi kartaa, inkasta oo aanay ku jirin sawiro meel dhaw laga soo qaaday oo diyaaradeen sida magaaloyinka maraykanka hadana, aad bay u xiiso badantahay in aad wadankaaga magaalooyinkiisa, tuuloyinkiisa ama buurahiisa aanad waligaa aanad arag aad si gaara ugu eegtid. Tusaalayaasha halkan hoose waa Geeskii afrika markaad ku soo dhawaanaysid. Markaad hoos u sii socotid waax dooranaysaa dhinaca magaalada aad doonaysid in aad si gaara u eegtin. Anigu waax u durkay markiiba magaaladaydii aan magaalo aan ku doorsadaa aanay jirin waa Hargeisa iyo magaaladaan ku dhashay waa Jabouti oo labadaba aad si fican ugu arki kartid Google Earth.
Mararka qaarkood waxaad arkaysaa wax aanad filanayn tusaale, inkastoo aqaan magaalada Berbera hadana maan ogay in ay leedahay gacan bada ku dhex jira oo dakadeeda dabiiciga ah ka dhigay mid dabysha ka celeya. Waxa kale oo aanan waligay filayn in Buurta Almis ay tahay mid sidaa u wayn oo ko taala meel gooniya oo ka yara baxsan silsilada Golis.
Muqdisho waa magaalada qudha ee aan soo helay maab elegtronig ah oo la sameeyay wakhtigii dagaalkii Maraykanak eeg forumka lagu soo ban dhigo BBS. Keyholehttp sawiro dheerada oo aad boragaraamkaga ku dhex furi kartid si aad warbixin ka badan inta ku jirta aad u heshi.
Gabagabaddii waxa suurto gal ah in aad Google earh kaaga aad ku kordhisid sawiro diyaarad lagu soo qaaday sida kuwan sare Sawiradani waa Mogadisho, Hargaysa iyo Barbara.
posted by abdi @ 12:09 AM
At 6:08 PM, mogadishu said…
At 5:40 PM, Taha said…
Berbera is bfull, really nice pics
At 3:55 AM, Anonymous said…